7 Guryo Ammaan ah si aad u joogtid intaadan dhiman
Hurdada markaan maroodiya, way soo baxdaa, waa qiimo jaban iyo kharash yar
Si aad u badan oo safarro ah, hudheel ayaa wax yar ka badan booska uu seexdo, qubeyska, iyo ganacsiga. Xitaa haddii aad difaacdo jilicsanaanta raaxada, si kastaba ha ahaatee, meelo gaar ah ayaa ka sarreeya arimahaan-waxay khibradahooda iyo naftoodaba ka yihiin. Laga soo bilaabo jawiga qunyar-socodka ah, dhaqanka qadiimka ah, aragtida muuqaalka ah ee magaalada, halkan waa toddobo meel oo u dhigma lacagta caddaanka ah, marka la barbar dhigo hoteelada raqiis ah.
Four Seasons Safari Lodge, Tansaaniya
Aragtida quraacda ee ka soo baxa Four Season Serengeti. Robert Schrader
Ka feker daawashada qoys maroodi ah oo hortaada ku socda sida aad quraac u leedahay, ama aad u seexato codka libaaxa libaaxa. Taasina waxay noqon kartaa mid sahlan in la yiraahdo intii la qabtey, laakiin dhammaan waxyaabahan oo kale ayaa ka badan suurta galnimada Four Seasons Safari Lodge, oo dhisay qoto-dheer Serengeti Tansaaniya. Qiimaha qolka halkan wuxuu ku bilaabmaa qiyaastii $ 1,100 habeenkii, inkasta oo suurtagal u ah qolalka ugu raaxeysan ay ku kici karaan daraasiin ka badan intaas.
Biyo kulul dabiiciga ah oo ku yaala webiga Japanese Alps? Haa fadlan. Robert Schrader
Waa arrin aad u farabadan oo aan la fahmi karin marka la eego dhaqanka dabiiciga ah ee kuleylaha kulaylku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah khibrada safarka ee Japan. Maxay yartahay in ay tahay meesha ugu fiican ee ku yaal Japan? Takaragawa Onsen, oo ku teedsan webiga Japanese Alps laba saacadood oo waqooyiga Tokyo ah oo tareenka Shinkansen ee tareenka ayaa kakoobi doona kiis adag, gaar ahaan tan aad ku noolaan kartid illaa 200 oo doolar inta lagu jiro qaybo badan oo sanadka ah.
Ku seexo hoostii Northern Nights ee Finland. Tarja Mitrovic adiga oo isticmaalaya Wikimedia
Finland badanaa waxay helaysaa mishiinka marka ay timaado wadamada Waqooyiga Yurub, laakiin Finland Lapland waxay halkaas joogtaa ugu fiican. Oo waxaan ula jeedaa "halkaa": Waxay ku fadhidaa xagasha Arctic Circle. Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo muuqaalkan dukumiintiga, halkaasoo heerkulku hoos udhigi karo -40ºF, waa inuu seexdo mid ka mid ah igloos muraayada ah ee Kakslauttanen Igloo Village, taas oo sidoo kale dhacdo inay noqoto meel aad u fiican oo lagu qaado nalalka Northern Nights.
Waa maxay habka ugu fiican ee Bolivia loo yaqaan 'Uyuni Salt Flats' ka badan inta lagu seexdo hudheel laga sameeyey cusbo? Leonora Enking via Flickr
Socotaal badan ayaa la yaabay in ay bartaan in Salar de Uyuni ee Bolivia (aad ogtahay, meel u eg muraayad weyn oo cirka) ma aha xeeb, laakiin roobka ayaa ku daboolay flat. Xitaa wax badan oo la yaab leh waa xaqiiqda ah in qof uu dhisay hudheel lagu sameeyey cusbo halkaas, aadna joogi kartid illaa $ 100 habeenkii.
"Buulada dadka" ee Xarunta Treebones ee Big Sur, California. Treebones Resort
Big Sur, California waa mid ka mid ah goobaha ugu quruxda badan Mareykanka, xitaa haddii aad aragto haddii ay tahay waxa aad ku dhejin karto intaad ku jirto safar waddo ee xeebta California. Mid ka mid ah habka loo yareeyo sixirka Shirkada Big Sur muddo yar waa in uu seexdo - sida ugu fiican ayaa shaki ku jira in mid ka mid ah kuwa loogu yeero "Buulo Bani'aadan" oo laga helo dalxiiska Treebones. Kuwani waxay ku yaalaan xayndaab, kuwaas oo kaa xayiraya hillside oo ka sarreeya xeebta, qiimo macquul ah, marka la barbardhigo qiyaastii illaa $ 150 si loo bilaabo.
Ku seexo gudaha mid ka mid ah muusikada cappadocia. Calflier 001 via Flickr
Gobolka Turkiga ee Cappadocia wuxuu caan ku yahay waxyaabo badan oo la mid ah, sida diyaaradaha hawada ee hawada kulul iyo dhagxaan qallafsan, kuwaas oo qaababka salka ah ay yihiin dabiici. Maxaa laga yaabaa inaadan ogaan ilaa aad ka soo degto Goreme, magaalada ku taal magaalada, waa meesha ay caan ku tahay godka, taas oo aad si shakhsi ahaan ah ula kulmi karto haddii aad joogtid Cappadocia Cave Suites. Inkasta oo ay ku haboon tahay horumarinta qulqulka / raaxada, qiimaha halkan hoose waa hooseeyaa waxaana inta badan ka hooseeya $ 100 habeenkii.
Qoraaga ayaa ku dabaalanaya barkadda madaarka ee Marina Bay Sands Hotel ee Singapore. Robert Schrader
Maalmahan, hoteelada quruxda badan ee Aasiya ayaa ah dime daraasiin ah, laga bilaabo Bangkok, ilaa Tokyo, ilaa Ho Chi Minh City. Laakiin markii Singapore's Marina Bay Sands ee la furay sannadkii 2010, waxay dajisay heerar badan oo hudheelo badan oo wali ku adagtahay inay maanta kulmaan. Midaas, cirifka muuqaalka muraayadaha, oo ah mid weyn oo ku filan in lagu soo saaro Airbus A380 diyaaradaha. Waxaad halkan joogi kartaa qiyaastii $ 275 habeenki, inkastoo hudheelka ayaa sidoo kale iibiya baasaboorka qulqulka ee jajabka ah, haddii aad rabto inaad aragto aragtida.
9ka Best Sydney Hotels ee 2018
Hudheelada Goobta ee Iowa: Mason House Inn
Four Seasons Hotels iyo Dalxyada
Qaadashada Dhamaan Dhammaan Lahaanshaha ama Hotel-Keli?
10 Fasaxyada Best Spa Hotels iyo Dalxiiska ee 2018
Goobaha Guunta: Hotel del Coronado
Talooyinka Safarka ee Boquete Panama
Dawooyinka laguu qoray ee Oklahoma City
Ugu sareeya 9 Fasaxyada qoysaska leh ee qoysaska Florida
Best of Festivals Art Festivals
Utah Kids Eat Deals oo lacag la'aan ah
Kala hadal cajaladaha Subterranean ee Rome
2017 Khariidadda iyo Muujinta Khariidadda Diyaargarowga ah
U diyaargarowga 4-da July ee waddada leh meelahan RV
Socodka safarka ee Morocco
Helitaanka Cuntada Aanan Bixin Safarkaaga Louisiana Road Trip
Waxyaabaha xiisaha leh ee lagu qabto goobaha kayeelka xitaa haddii aanad Ski lahayn
Sida Loo Isticmaalayo Milkiilahaaga: Hore, Ganacsiga, Dhaqaalaha Lacagta, iyo Tababaraha
Daraasada & Qodobada
Harry Potter's Diagon Alley ee Universal Orlando Resort
Waa in la eego Jasiiradaha Vermont